Kiraro ho an'ny ankizy, kiraro lehilahy, orinasa kiraro vehivavy | Fowin Footwear
Kiraro Slippers Men
Kapa kiraro lehilahy
Kiraro Slippers Ankizy
Kiraro kiraro ho an'ny ankizy
Kiraro Casual Ankizy
Vehivavy Slippers Kiraro
Kiraro kiraro vehivavy
NIorina tamin'ny taona 2003
FOWIN dia mamokatra kiraro, kapa ary kiraro mahazatra.
Manome ny tsara indrindra kiraro ho an'ny ankizy, kiraro ho an'ny lehilahy& kiraro vehivavy.
Ny mpamorona anay 10 dia afaka manamboatra ny entanay rehetra ho anao, na mamorona vokatra vaovao iray manontolo avy amin'ny scratch mifototra amin'ny famaritanao.
ISO 9001: 2000-orinasa voamarina.
Manana tsipika famokarana roa izy io, atrikasa fanindronana iray ary tsipika roa fonosana.
Manome tolotra namboarina
Shantou Fowin Footwear Limited dia niorina tamin'ny taona 2003. Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana kapa sy kapa amin'ny hoditra sy PU miaraka amin'ny EVA sy PVC soles izahay. Ny katalaogy ankehitriny dia misy endrika mihoatra ny 120 ho an'ny kiraro ho an'ny lehilahy, kiraro ho an'ny vehivavy ary kiraro ho an'ny ankizy. Izahay dia miasa orinasa 16,000m2, ISO 9001: 2000 voamarina miaraka amin'ny tsipika famokarana roa, atrikasa fanamboarana tsindrona ary tsipika roa fonosana. Ny fahafahantsika isam-bolana dia 150.000 pairs. Ny mpamorona anay 10 dia afaka manamboatra ny entanay rehetra ho anao, na mamorona vokatra vaovao iray manontolo avy amin'ny scratch mifototra amin'ny famaritanao.
Manana ekipan'ny mpanjifa izahay izay ahitana matihanina 20 izay mahay miteny anglisy sy japoney ary manana biraon'ny sampana any Dubai izahay hikarakara ny baiko avy any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana. 15 andro monja ny fotoana anaterana entana. Fantaro hoe nahoana ny mpividy mihoatra ny 30 manerana an'i Amerika Avaratra, Eoropa, Afovoany Atsinanana ary Azia Atsimo Atsinanana no matoky ny Fowin Footwear. Mifandraisa aminay anio.
Ambony:puSoso-kevitra: puInsole: pvcOutsole: pvcLoko: manga/brMOQ: 800prsNy habeny:#36-41Fandoavana entana: TT/LCseranana EX: SHENZHEN/SHANTOUFe-potoana: 35 androMifandraisa amiko:fowin@fowin.cn
Slipper vato vehivavy
Ambony:puSoso-kevitra: puInsole:puOutsole:tprLoko: manga/brMOQ: 800prsNy habeny:#36-41Fandoavana entana: TT/LCseranana EX: SHENZHEN/SHANTOUFe-potoana: 35 androMifandraisa amiko:fowin@fowin.cn
Slipper Background Vehivavy
Ambony:puSoso-kevitra: puInsole:puOutsole:tprLoko: bl/nudeMOQ: 800prsNy habeny:#36-41Fandoavana entana: TT/LCseranana EX: SHENZHEN/SHANTOUFe-potoana: 35 androMifandraisa amiko:fowin@fowin.cn
Slipper Sporty vehivavy
Ambony:puSoso-kevitra: puInsole:puOutsole: pvcLoko: tan/slMOQ: 800prsNy habeny:#36-41Fandoavana entana: TT/LCseranana EX: SHENZHEN/SHANTOUFe-potoana: 35 androMifandraisa amiko:fowin@fowin.cn
Niorina tamin'ny 2003, dia a orinasa manokana amin'ny fitambaran'ny fampandrosoana, famokarana ary fivarotana. FOWIN dia mamokatra kiraro, kapa ary kiraro mahazatra. Manome ny kiraro tsara indrindra ho an'ny lehilahy, kiraro vehivavy mahazatra& kiraro ankizy.
Miaraka amin'ny kalitao ho voalohany, ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no tanjona izay tohizan'i FOWIN, raha ny fitokisan'izy ireo sy ny fanohanan'izy ireo kosa no tosika mampandroso an'i Fowin. Tadiavo ny safidy farany amin'ny kiraro vehivavy mahazatra, kiraro ho an'ny lehilahy& kiraro ho an'ny ankizy amin'ny kiraro fowin.
Inona no mahatonga ny mpanjifantsika
mientanentana ny mpanjifa?
Sary mpanjifa fampirantiana